Farsamada God Martial God - Ka akhri Webtoon Korean Manhwa - Manhua - Manga iyo Novel Novel Online lacag la'aan
Xiddigta Marti Eebbe Celceliska 0 / 5 ka mid ah 0
Action, Adventure, Drama, Fantasy, haraam, Arts Martial, Romance, Shounen
Dunida oo dhan waxaa yaal laba iyo toban waddo oo lagu fuulo Tower of God, iyo halyeeyada,
laba -iyo -tobankan waddo waxay u horseedaan dhinaca halyeeyga ah ee dhimashada.
Si kastaba ha ahaatee, waddooyinkan ku yaal Daarta Ilaahay, aad bay u dheer yihiin, oo aan dhammaad lahayn.
Waqtiyadii hore waxaa jiray noocyo badan oo fanka dagaalka ah, nasiibdarro adduunka waxaa ka dhacay isbedelo aad u xun,
oo kaliya saddex ayaa hadhay: Olol, Dragon iyo Star Martial Arts.
Jiilkii khubarada saddexdaas fanka dagaalka ayaa raadinaya waddada geerida.
Xirfadlaha Farshaxanka Farshaxanka ee socdaalkiisii ​​nololeed, isagoo noqday Ilaaha ugu sarreeya.
Cutubka 480 September 15, 2021
Cutubka 479 September 15, 2021
Cutubka 478 September 15, 2021
Cutubka 477 September 15, 2021
Cutubka 476 September 15, 2021
Cutubka 475 September 15, 2021
Cutubka 474 September 15, 2021
Cutubka 473 September 15, 2021
Amiirad Qalbi jabtay